Tirada dadkii ku dhintay qarixii Soobe oo gaartay 358 - BBC News Somali
Wasiirka warfaafinta Soomalaiya Eng. Cabdiraxman Cumar Cusmaan (Eng. Yarisow) oo shir jaraa'id ku qabtay Muqdisho ayaa sheegay in la xaqiijiyay in qaraxaasi ay ku dhinteen 358 qof iyo 228 qof oo dhaawac ah.
Wasiirku waxa uu sheegay in sidoo kale nolol iyo geeri la la'yahay 56 qof halka 99 qof oo kolkii hore dhaawac ahaan cusbitaalada loo dhigay hadda cusbitalka laga saaray.
Sida uu sheegay Eng. Yariisow, 122 qof oo dhaawac ah ayaa loo qaaday dalka dibaddiisa, gaar ahaanna waddamada Kenya, Turkiga iyo Suudaan si halkaa loogu soo daweeyo.
Tiro kale oo dhaawac ah ay jiifaan cusbitaalada Muqdisho.
Dhanka kale, wasiirka amniga gudaha Maxamed Abuukar Isloow ayaa sheegay in dhowr qof loo soo qabtay qaraxa, balse waxa uu ka gaabsaday in wax faafaahin ah uu ka bixiyo maadaama buu yiri uu wali baaritaan socdo.
Image caption Cise Xuseen wuxuu saarnaa gaari markuu qaraxa dhacayay, hadana waxaa lagu daweynayaa cisbitaal.
Ku dhowaad toddobaad ayay ku qaadatay dowladda in ay hesho xogta rasmiga ee dadkii ku waxyeelloobay qaraxii Muqdisho.
Ilaa saddex guddi oo dowladda ay u saartay xaaladdan, hay'ado iyo kooxo mutadawiciin ah ayaa soo uruuriyay xogtan ay haatan dowladda shaacisay.
Dowladdu waxay sheegtay in hadda la soo gabo gabeeyay wejiga koowaad ee gargaarka deg degga ah.
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa dhawaan la filayaa in uu hadal ka hor jeediyo xubanaha labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya, iyada oo la filayo in uu kala hadlo xaaladda ammaan ee dalka soo wajahday iyo tallaabooyinka ay xukuumaddu dooneyso in ay qaaddo, kaddib qaraxii lagu hoobtay.